Tsy hitako ny boaty "Preview DirectX 10" eo amin'ny toeran'ny FSX. Inona no tokony hataoko ? - Rikoooo
Tsy afaka mahita ny «Preview DirectX 10» boaty ao amin'ny randram-FSX. Inona no tokony hataoko ?
Voalohany, jereo fa manana FSX-SP2 nametraka amin'ny solosaina. Eny tokoa, ny « Preview DirectX 10 »Ihany no hita raha efa nametraka ny SP2 Patch, na raha manana FSX haingana na FSX Gold na FSX Steam Edition.
Ireto ambany ireto dia afaka misintona roa tampina
Download ny SP1
Download ny SP2